ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များ နီးကပ်လာပြီဖြစ်သဖြင့်၊ အဓိကမေးခွန်း ရောင်းဝယ်သူတိုင်းထံတွင် ရှိလာပါပြီ: ဒီလိုအားလပ်ရက်ရှညများမှာ ရောင်းဝယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သလား? FBS ဖြေကြားသည်မှာ: ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်! များစွာသောအကြံပေးချက်များကို စိတ်ထဲတွင်မှတ်ထားရန်လိုပြီး၊ အခြားသူများနားနေချိန်တွင် သင်ငွေရှာနိုင်ပါသည်။
အကြံပြုချက် #၁ - "နှစ်ကုန်" အကျိုးသက်ရောက်မှုအား လျှော့မတွက်ပါနှင့်
ကာလရှည်ကြာရောင်းဝယ်ပါက၊ ငွေကြေးသည် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျဆင်းပြီး၊ အခြားတစ်ခုအတွင်း မြင့်တက်လေ့ရှိကြောင်း သတိပြုမိပြီးဖြစ်မည်။ ၎င်းအား ရာသီအလိုက် Forex ယိမ်းယိုင်မှုဟုခေါ်သည်။ သုံးသပ်သူအချို့သည် "နှစ်ကုန်" သက်ရောက်မှုအား သင်ဂရုစိုက်သင့်သည့် အဓိက ရာသီအလိုက်ပုံစံအဖြစ် ပြောကြသည်။ နှစ်ကုန် အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ သာဓကကောင်းမှာ ဒီဇင်ဘာနှင့် ဇန်နဝါရီတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်း အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ USDသည် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကျလေ့ရှိပြီး၊ ဇန်နဝါရီ-ဖေဖော်ဝါရီတွင် ပြန်နာလန်ထူလေ့ရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာလသည် များသောအားဖြင့် အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာတင်ခြင်းတို့အတွက် အဓိကလဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရှုံးနေသောအနေအထားများကို ကိုင်ထားသူများသည် ယင်းတို့အား ဒီဇင်ဘာမတိုင်မီ ပိတ်ရန်ကြိုးစားကြပြီး၊ ဇန်နဝါရီအစတွင် အသစ်ပြန်ဖွင့်ကြသည်။ နှစ်တစ်နှစ်၏ နောက်ဆုံးပတ်များတွင် သင့်အရောင်းအဝယ်များစီစဉ်ရာတွင် ဤယိမ်းယိုင်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နှင့် သင့်ငွေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဂရုစိုက်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
အကြံပြုချက် #၂ - stop-lossများ နှင့် take-profitများကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန်
ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုသည် ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်ကူးပိတ်ရက်များအတွင်း အလွန်နည်းလေ့ရှိသည့်အတွက် သင့် stop loss နှင့် take profit သတ်မှတ်ချက်များကို ပြန်လည်ချိန်ဆရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ take profitကို သင့်အော်ဒါကနေ ၁၀၀ pipအကွာတွင် ပုံမှန်ထားပါက၊ ၇၀ ကနေ ၈၀ pipများပစ်မှတ်ကိုရွေးတာပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။
အကြံပြုချက် #၃ - ကနေဒါဒေါ်လာရောင်းဝယ်ရန် အခွင့်အရေးယူပါ
သုံးသပ်သူအချို့အရ၊ USD/CAD သည် ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များအတွင်း အခြားငွေကြေးအတွဲများနှင့်ယှဉ်လျှင် ပိုပြီးဈေးလှုတ်ကြမ်းလေ့ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ၎င်းသည် ရောင်းဝယ်ရန်အခွင့်အရေးများ ယူဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
အကြံပြုချက် #၄ - Scalp, ဖြစ်နိုင်ပါက
ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်ကူးအားလပ်ရက်များသည် ရှည်သကဲ့သို့၊ Forexတွင်ရောင်းဝယ်ခြင်းသည် အလွန်ကန့်သတ်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ရေတိုရောင်းဝယ်သူများအာ ရောင်းဝယ်ရန်ပုံမှန် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပေးနိုင်သည်။
အကြံပြုချက် #၅ - ပြက္ခဒိန်ကို စစ်ဆေးပါ
နှစ်တစ်နှစ်၏ နောက်ဆုံးအပတ်များအတွင်း၊ စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်တွင် ဖြစ်ရပ်များ အများအပြားမရှိပါ။ ထို့အပြင်၊ Forex ဈေးကွက်သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၅နှင့် ဇန်နဝါရီ ၁တွင် ပိတ်ပါသည်။ အန္တရာယ်များလျှော့ချရန်၊ ဤရက်များတွင် သင့်အရောင်းအဝယ်များ ပိတ်ထားတာ ပိုကောင်းပါမည်။ ဆိုဒ်ရှိ "ကုမ္ပဏီသတင်းများ"ကဏ္ဍတွင် Forex ဈေးကွက်နှင့် FBS၏ ပိုမိုခိုင်လုံသော အလုပ်ချိန်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
နှစ်တစ်နှစ်၏ အဆုံးသည် အရောင်းအဝယ်အတွက် အရမ်းဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုတာကို သင်ကြားရမှာပါ။ သို့သော် သင်သည် ဤအချိန်ကာလအတွင်း တိကျသေချာသော လက္ခဏာရပ်များကို ပိုပြီးဂရုစိုက် အလေးထားပါက၊ သင်သေချာပေါက် အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။
forex ကုနျသှယျ forex exchange စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန်
26.12.2018 09:52 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ ခန့်မှန်းရခက်သော ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ
၂၀၁၉တွင် အရာအားလုံးပြောင်းလဲနိုင်မည့် ငန်းနက်များ
usd သြစတြေးလျ gold gbp eur ရေနံ bitcoin ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် trump
10.12.2018 15:28 ရွှေအရောင်းအဝယ် ဗျူဟာများ
အဝါရောင်သတ္တုသည် Forex ဈေးကွက်ရှိ အခြားကုန်စည်များ (သို့) ငွေကြေးအတွဲများကဲ့သို့ တူရာကိုရွေ့လျှားတတ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် ရွှေအရောင်းအဝယ်သည် အလွန်လွယ်ကူသော ခေါင်းစဉ်တော့မဟုတ်ပါ။
forex ကုနျသှယျ gold အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည်
06.12.2018 15:24 အရောင်းအဝယ် အညွှန်းကိန်းများ မိတ်ဆက်
Dow Jones, FTSE, DAX... ဤအရာများသည် သတင်းစာမျက်နှာတွင် သင်နေ့စဉ်တွေ့ရမည့် မှော်စကားလုံးများဖြစ်သည်၊ ယင်းတို့တန်ဖိုးအပြောင်းအလဲသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ရောင်းဝယ်သူများအတွက် နှလုံးရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့မှုကို ဖန်တီးပေးပြီး၊ မူဝါဒချမှတ်သူများအား သူတို့၏ စီးပွားရေးတွင် အပြောင်းအလဲများအသုံးချမှုကို ဖြစ်စေသည်။
ပညာရေး စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက် ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည်